ဇနီးဖြစ်သူကို မငွေသိမ်းလို့သွားစမိလို့ နာမည် အသစ် အပေးခံခဲ့ရတဲ့ ခင်လှိုင် – Cele Oscar
ဇနီးဖြစ်သူကို မငွေသိမ်းလို့သွားစမိလို့ နာမည် အသစ် အပေးခံခဲ့ရတဲ့ ခင်လှိုင်
ဟာသဇာတ်ရုပ်တွေကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ဟာ လက်ရှိမှာဆိုရင် အရမ်းကို ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုကမ္ဘာလေး ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ထူးချွန် တဲ့ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် တစ်ယောက်တင်သာမကဘဲ ဇာတ်သဘင် ဘက်မှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုတစ်ခဲနက်ရရှိထားတဲ့ လူရွှင်တော် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုနောက်ပိုင်းတွေမှာသူဟာ အောင်မြင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ဝန်းရံအားပေးခြင်းကိုလည်း ရရှိထားပြန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တည်မြဲတဲ့ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ပုံဖော်ထားပြီးပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ခင်လှိုင်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေ အမြဲတမ်းအားကျလို့နေခဲ့ရပါတယ်။ အခုအချိန်ထိလည်း လူငယ်စုံ‌တွဲလေးလို မပြောင်းလဲတဲ့ အချစ်တွေနဲ့မို့ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘဲ အပေးအယူမျှမျှနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း မှာတော့ ခင်လှိုင်ဟာ မိသားစုနဲ့အတူ ချောင်းသာကမ်းခြေကို အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ရောက်ရှိ‌လို့နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အခုလည်း ကမ်းခြေက ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးရဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ရင်းနဲ့ ချစ်ဇနီးလေးကို စနောက်လိုက် ရာကနေ ဇနီးဖြစ်သူပြန်ခေါ်လိုက်နဲ့နာမည်ပြောင်လေးကြောင့် အသည်းယားပြီး ချစ်ပိုခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပရိသတ်တွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ ” ကိုယ်ကသူ့ကို ချစ်စနိုးနဲ့ မငွေသိမ်းလို့ခေါ်လိုက်တာ….သူကပြန်ခေါ်တယ်… ကိုဗိုက်သိမ်းတဲ့ ” ဆိုပြီးတော့ ကြည်နူးဖွယ်ရာ လေးပြန်ပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ… အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ခင်လှိုင်တို့ဇနီးမောင်နံနှစ်ယောက် ရတုတွေအဆက်ဆက်တိုင်တဲ့အထိပေါင်း‌ဖက်နိုင်ကြပြီး အတူတူအိုမင်း နိုင်ကြပါစေလို့ ပရိသတ်တွေနဲ့ထပ်တူ ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
ဟာသဇာတျရုပျတှကေို ပီပီပွငျပွငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျ ခငျလှိုငျဟာ လကျရှိမှာဆိုရငျ အရမျးကို ရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုကမ်ဘာလေး ကိုပိုငျဆိုငျထားခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ထူးခြှနျ တဲ့ဝါရငျ့ သရုပျဆောငျတဈယောကျ တဈယောကျတငျသာမကဘဲ ဇာတျသဘငျ ဘကျမှာလညျး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုတှကေိုတဈခဲနကျရရှိထားတဲ့ လူရှငျတျော တဈယောကျလညျးဖွဈပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ အခုနောကျပိုငျးတှမှောသူဟာ အောငျမွငျတဲ့ ရုပျရှငျဒါရိုကျတာတဈယောကျအဖွဈလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ဝနျးရံအားပေးခွငျးကိုလညျး ရရှိထားပွနျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ တညျမွဲတဲ့ခဈြခွငျးတှနေဲ့ပုံဖျောထားပွီးပြျောရှငျမှုအပေါငျးနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ ခငျလှိုငျရဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကိုတော့ ပရိသတျတှေ အမွဲတမျးအားကလြို့နခေဲ့ရပါတယျ။ အခုအခြိနျထိလညျး လူငယျစုံ‌တှဲလေးလို မပွောငျးလဲတဲ့ အခဈြတှနေဲ့မို့ ပွဿနာ ကွီးကွီးမားမား ဖွဈတယျဆိုတာမြိုးမရှိဘဲ အပေးအယူမြှမြှနဲ့ အိမျထောငျရေးလေးတဈခုကိုတညျဆောကျထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီရကျပိုငျး မှာတော့ ခငျလှိုငျဟာ မိသားစုနဲ့အတူ ခြောငျးသာကမျးခွကေို အလုပျတဈဖကျနဲ့ရောကျရှိ‌လို့နခေဲ့တာကိုတှရေ့ပါတယျ။
လညျး ကမျးခွကေ ဇနီးမောငျနှံ နှဈဦးရဲ့ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေို တငျရငျးနဲ့ ခဈြဇနီးလေးကို စနောကျလိုကျ ရာကနေ ဇနီးဖွဈသူပွနျချေါလိုကျနဲ့နာမညျပွောငျလေးကွောငျ့ အသညျးယားပွီး ခဈြပိုခဲ့ရတဲ့အကွောငျး ပရိသတျတှကေိုပွောပွခဲ့တာပါ။ ” ကိုယျကသူ့ကို ခဈြစနိုးနဲ့ မငှသေိမျးလို့ချေါလိုကျတာ….သူကပွနျချေါတယျ… ကိုဗိုကျသိမျးတဲ့ ” ဆိုပွီးတော့ ကွညျနူးဖှယျရာ လေးပွနျပွောပွခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ကဲ… အရမျးကိုခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ခငျလှိုငျတို့ဇနီးမောငျနံနှဈယောကျ ရတုတှအေဆကျဆကျတိုငျတဲ့အထိပေါငျး‌ဖကျနိုငျကွပွီး အတူတူအိုမငျး နိုငျကွပါစလေို့ ပရိသတျတှနေဲ့ထပျတူ ဆန်ဒပွုဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော….
မွေးနေ့လေးမှာ ဖေ့ဘွတ်ကပေးတဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အရာလေးတစ်ခု ရရှိခဲ့လို့ အတိုင်းမသိပျော်ရွှင် နေတဲ့ ထွန်းကိုကို